INkonzo yeZiko loLungiselelo loMthengi kunye noMvelisi | Ukwenziwa kwentsimbi yeHengli
IZiko lethu lokuLungiselela lasekwa ekupheleni kuka-2014, malunga nabasebenzi abangama-50, besebenzisa itekhnoloji ye-ERP yolwazi kunye nolawulo lwebhakhowudi ukuqinisekisa ukuchaneka kokugcinwa kweemveliso.
Iinkqubo ezenzekelayo zeempahla zisebenza ngokuskena ibhakhowudi kwiindawo. Iskena sebhakhowudi sisetyenziselwa ukufunda ibhakhowudi, kwaye ulwazi olukhowudiweyo yibhakhowudi lufundwa ngumatshini. Olu lwazi lulandelwa yinkqubo yekhompyuter esembindini. Umzekelo, iodolo yokuthenga inokuqulatha uluhlu lwezinto eziza kutsalwa ukuze kupakishwe kunye nokuthunyelwa. Inkqubo yokulandelwa kwempahla inokusebenza ngemisebenzi eyahlukeneyo kule meko. Inokunceda umsebenzi ukuba afumane izinto ezikuluhlu loku-odola kwindawo yokugcina izinto, inokufaka ikhowudi kulwazi lokuhambisa olunje ngeenombolo zokulandela umkhondo kunye needilesi zokuhambisa, kwaye inokuzisusa ezi zinto zithengiweyo kubalo lwee-inventri ukugcina ubalo oluchanekileyo lwezinto ezikhoyo.
Yonke le datha isebenza ngokubambisana ukubonelela amashishini ngolwazi lokulandelela uluhlu lwexesha langempela. Iinkqubo zolawulo lwempahla zenza ukuba kube lula ukufumana kunye nokuhlalutya ulwazi lwempahla ngexesha lokwenyani kunye nophando olulula ledatha kwaye liyinto ebalulekileyo kulo naliphi na ishishini elihambisa unikezelo lwempahla.
Inkqubo ye-ERP iphucula ukusebenza (kwaye ke ngokwenza inzuzo) ngokuphucula indlela ezisetyenziswa ngayo izixhobo zeHengli, nokuba ezo zixhobo lixesha, imali, abasebenzi okanye enye into. Ishishini lethu lineenkqubo zempahla kunye neendawo zokugcina, ke isoftware ye-ERP iyakwazi ukudibanisa le misebenzi ukuze ilandelele ngcono kwaye ilawule iimpahla.
Oku kwenza ukuba kube lula ukubona ukuba kungakanani uluhlu lwempahla olukhoyo, loluphi uluhlu lwempahla oluza kuziswa, loluphi uluhlu lwempahla olungena luvela kubathengisi nangaphezulu.
Ukujonga ngononophelo kunye nokulandela umkhondo ezi nkqubo kunceda ukukhusela ishishini ekuphelelweni yistokhwe, ukungalawulwa kakuhle konikezelo kunye neminye imiba enokubakho.
Egqithileyo Inkonzo ye-CNC Machining
Okulandelayo: IPlasma kunye neNkonzo yokuSika iLangatye
Ukugqitywa kweNkonzo yoNyango